PressReader - Ilanga langeSonto: 2017-09-03 - Abambisene amakhosi angamawele
Abambisene amakhosi angamawele
Kwenziwa kuhambe ngakubili Konke
Ilanga langeSonto - 2017-09-03 - Izindaba - JOHN HLONGWA
BUQINE ngendlela eyisimanga ubudlelwano bamawele angamakhosi esizwe sakwabiyela, obuka, ngasemelmoth, enyakatho yekwazulu-natal.
Inkosi uphiwayinkosi Biyela newele lakhe usiphosenkosi Biyela (49) balandise ILANGA Langesonto ngempilo yabo kusukela ebunganeni.
Nakuba kugcotswe ngokusemthethweni inkosi uphiwayinkosi kodwa bathi benza imisebenzi yesizwe ngokubambisana futhi basebenzisana kahle kakhulu.
Leli phephandaba lithole ukuthi akuqali ukuthi kube namakho- si angamawele kulesi sizwe njengoba kuvela emlandweni ukuthi ake aba khona.
Elandisa leli phephandaba lawa makhosi athi akhule ndawonye, afunda ndawonye esiqhomaneni lapho enze imfundo yamazinga aphansi, adlulela esikoleni samabanga aphezulu ebesibizwa ngeDumanikahle kodwa manje esesibizwa ngedumezweni.
“Bebethwele kanzima othisha abebesifundisa njengoba bebengakwazi ukusihlukanisa. Bebevele basibize ngesibongo ngoba benqena ukuthi izingane zizobahleka kwazise babengakwazi ukusihlukanisa,” kusho wona.
Lawa makhosi aveze ukuthi ngesikhathi esesikoleni ake aphazamiseka esikoleni njengoba iwele elincane liqalwe wukugula, laphathwa yikhanda elingapheli. Kwabe sekuvela ukuthi lelo khanda labe lihambisana nezinkinga zobukhosi, ase ethathwa ayofihlwa kwasokhulu, Kwambonambi ekhaya konina.
Inkosi ezala lawa makhosi nguMkhombisi kadumezweni kanti yakhothama ngomfumfu (October) we-1998. Kuthe ngozibandlela ngowezi-2000 kwagcotshwa inkosi ehola isizwe njengamanje unkanyiso. Kubikwa ukuthi inkosi eyakhothama yashiya iqophe umyalezo eyawathumela emnyangweni wezokubusa ngokubambisana nobuholi bomdabu Kwazulu-natal, okuyiwo owafika nalowo mya- lezo watshela umndeni ukuthi ngubani okufanele ahola isizwe.
Inkosi engagcotshwanga ibizwa ngenkosi encane kodwa iyayithola imihlomulo yobukhosi ikakhulukazi emphakathini, njengokuthi nje uma umuntu exoshisa inkosi noma eyipha isipho kumele leso sipho sihambe ngambili - esenkosi nesenkosi encane.
Njengoba ekhonza ebandleni lamanazaretha, ebuhleni, womabili abizwa ngamakhosi futhi ahlaliswa endaweni yawo amakhosi. Yimihlomulo evela kuhulumeni etholwa yinkosi egcotshiwe kuphela.
Njengoba inkosi encane yakhe kude buduze nenkosi egcotshiwe, nayo iyayiqhuba eminye imisebe- nzi yesizwe emincane, njengokubikwa kwezinkinga zomphakathi, kodwa ayithethi amacala.
Amakhosi aqale ukuhlukana empilweni yawo ngo-1992 ngesikhathi enye ithola umsebenzi wokuba yisosha emtubatuba, kwathi ngemuva kwesikhashana nenye yafudukela empumalanga isiyoba yisosha khona. Njengamanje inkosi usiphosenkosi iseyilo isosha kodwa inkosi uphiwayinkosi seyayeka, iqhuba imisebenzi yesizwe kuphela.
Inkosi uphiwayinkosi ithathe undlunkulu oyedwa yabusiswa ngabantwana abayi-6, kwathi inkosi usiphosenkosi yona yabusiswa ngabatwana abayi-5 nayo kundlunkulu oyedwa.
YIWO lawa amakhosi esizwe sakwabiyela, obuka, ngasemelmoth, uphiwayinkosi nosiphosenkosi Biyela abangamawele.